गगन थापा भाग्ने हैन भिड्ने संकल्प गर !
जातालाई क्यान्सर उपचार गर्न जब नेपाल सरकारले ५० लाख राशी दिने निर्णय गर्यो तब चर्चा ,आलोचना, निन्दा, आक्रोस ,गाली र सन्देहको घेरामा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मिडियाका आकर्षण तथा स्वास्थ्य मन्त्रि गगन थापा परे । चौतर्फी बिरोध, असहमति, गुनासो, शंका अनि क्षोभ असन्तुस्टीले सामाजिक संजाल भरि भराउ भए ।
मायावी राजनीति र तेजहीन नेतृत्व
नेपालको राजनीति सँधैमायावी रहि आएको छ । पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र कालका ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन देखि लिएर अनेक खाले विद्रोह र आन्दोलनले यो प्रमाणित गरिसक्यो । यस्तो लाग्छ –‘नेपालका सबै परिवर्तनहरूको परिणति भनेकै ‘खोदा पहाड निक्लाचुहा’भएर गयो ।
हराएको रौनकता फिर्ता ल्याउनु पर्छ गाउँको
१८ ,२० बर्ष अघि सम्म प्रत्येक घर–घरमा आफूलाई चाहिने लसुन ,प्याज ,खुर्सानी ,साग ,सब्जी, तरकारी सबै आफ्नै करेसाबारीमा फल्थे । सिजनल फलफूल पनि बंगैचामा शोभायमान देखिन्थे । धान, कोदो, मकै, फापर, तोरी कोदोबालीले बारी झकिझकाउ हुन्थे । खेताला मेला–पर्व जात्रा पुजाको रौनक नै अर्को र रोमान्चकारी हुन्थ्यो, थियो । जो आजभोली छैन, भएको पनि घटेको छ ।
ट्रम्पको भाग्योदय, मोदीको ‘भारू’ नाच र रोगी सुजाता
हप्ता दिनअघि ‘अमेरिका भोट गन्दै, भारत नोट गन्दै र नेपाल छिमेकीले पुर्‍याएको चोट गन्दै’ रिदम मिलेको स्टाटस् साथीले लेख्दा छक्क परियो । गतहप्ता देशीविदेशी घटनाले नेपालीका ध्यान एकाएक तान्यो ।
झण्डै डेढ बर्ष अघिदेखि सरगर्मी र उतारमा रहेको अमेरिकी चुनाव अभियान अस्तिदेखि विश्रान्तिको चरणमा पुगेर सेलाएको छ । राष्ट्पति पदको प्रत्यासीका रुपमा खडा भएका प्रमुख दुई दलका उम्मेदवारमध्ये रिपब्लिकन उम्मेदवार–डोनाल्ड ट्रम्पले विजय हासिल गरे ।
‘तरकारीवाली’, मुखर्जी र नेपाली मूर्खजीहरू
सुजाता कोइरालालाई पत्र
दूरदराजका गाउँहरु जहाँ झाडापखाला लागेर समेत अकालमा मान्छेहरु मर्छन, राज्यको गलत नीतिको कारण मारिन्छन तिनीहरुलाई बचाउन सबै गाउमा स्वास्थ्चौकी स्वास्थ्यकर्मी र औषधि कहिल्यै अभाव नहुने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तयार गरि लागु गराउन अहोरात्र खट्नोस, राज्यलाई खबरदारी गर्नोस ।
मुखर्जीको परिपक्व उमेरको कूटनीतिक व्यवहार देखिएला ?
कुनै बेला स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीका विश्वास पात्र र दोस्रो वरीयताका मन्त्रीसमेत रहेका मुखर्जीका लागि नेपाललाई दिने केही संकेत होला भन्ने अनुमान थियो । तर त्यस्तो केही देखिएन ।त्यसैले यो उच्चस्तरीय सद्भावना भ्रमणले मात्र जेलिएको सम्बन्धमा सहजीकरण हुन सक्ने पनि देखिँदैन ।
अहिले नेपाल ‘जाम’मा छ !
राजनीतिक संक्रमणले ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने काइदा खडा गरेको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको एउटै मधेशप्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने मधेशवादी दलहरूका तीक्त अडान र सो हुनै नसक्ने भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको जोदाधा प्रवृत्तिमा काँग्रेस–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले आसन्न राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका भ्रमणबाट थप व्यापारिक र वाणिज्य सम्बन्धी फाइदा लिन सक्ने कुरामा आसा गर्न त सकिन्छ तर विश्वास गर्न सकिन्नँ ।
सरकारले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आउने दिन सार्वजनिक विदा दिएर अर्को आपत्तिजनक चाकडी र उत्ताउलोपन देखाएको छ । भारतीय राष्ट्रपतिले मेघालय,गोवा,सक्किम,त्रिपुराजस्ता कुनै भारतशाशित प्रान्तको औपचारिक भमण गर्दा त्यहाँका राज्यपालद्वारा गरिने स्वागत र अगुवाइको नमूना लाग्दछ यो उत्ताउलो कार्यक्रम ।
‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग प्रमुख प्राथमिकतामा’
दीक्षितहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गराइने
पठन–पाठन संस्कृतिलाई विकसित प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक : शिक्षामन्त्री